သူနဲ့ညားခဲ့ရင် အဆင်ပြေနိုင်၊မပြေနိုင် တွက်ကြည့်နိုင်တဲ့နည်း… - Padaethar
သင်နဲ့ အတူနေတဲ့အချိန်မှာ သူဟာပျော်ရွှင်နေပေမယ့် အဲဒီပျော်ရွှင်ခြင်းက ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပွေရှုပ်တတ်တဲ့ သူ့အကျင့်က သင့်ထက်သာမယ့်သူကို အမြဲတမ်းရှာဖွေနေလို့ပဲဖြစ်တယ် …။
(၂) ရတဲ့သူကတော့ သင်နဲ့သူဟာ ချစ်တော့ချစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မုန်းတီးမှုနဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။
အတူတူနေခဲ့ရင်လည်း လက်ဝှေ့ပွဲကိုကြည့်နေရသလို နေ့စဉ်ထသတ်မှာတော့ အမှန်ပါပဲ …။
အကျင့်တွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ တစ်ယောက်ပြင်းလာရင် ကျန်တဲ့တစ်ယောက် ကလည်း အလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါတောင်မှ သင်တို့မှာ သုံးပွင့်ဆိုင်မရှိသေးဘူးနော် …။
တစ်နေ့ကျရင် သူကခဏဝေးဝေးလောက် နေကြည့်ကြရအောင် လို့ပြောလာခဲ့ရင် သင်သူ့ကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါ။ သူက သင့်ကိုမချစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်နိုင်တဲ့ အချိန်တစ်ခုလောက်တော့ ထားပေးလိုက်ပေါ့နော် …။
(၃) ရတဲ့သူက Yahoo! နောက်ဆုံးတော့လည်း သင်က အစစ်အမှန်ကို တွေ့တာပဲလေ။
သင်တို့နှစ်ယောက် ရဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဟာ ရေစက်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တူညီနေတာပဲ …။
ဒါကြောင့်သင်ဟာ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အချစ်တွေကို ရှာဖွေနေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘယ်လူမှ သင့်ရဲ့အခုလိုအရသာမရှိတဲ့ ပေါရွှတ်ရွှတ်လူထက် ပိုပြီးကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင်သိလိမ့်မယ်။
မသိနိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီအချိန် ရောက်ခဲ့ရင် နှောင်းချင်လည်းနှောင်း သွားမှာပေါ့ …။
(၄) ရတဲ့သူက သင်နဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဟာ စေးကပ်ကပ်ကြီးလို ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုခွာခွာ ခွာလို့မရတဲ့ပုံစံ၊ ဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမှန်းမသိတဲ့ ပုံစံနဲ့တူနေတယ်။
သင်ကလည်း အိနြေ္ဒရှင်ပီသစွာနဲ့ သူ့ကိုချစ်တယ် လို့ ဖွင့်ပြောဖို့ မရဲဘူးဖြစ်နေတတ်တယ် …။
သင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်မဟုတ်ဘူးလို့ မယုံသင်္ကာမဖြစ်ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာယုံကြည်နေပါပြီ။
သင်ဟာ ဘုရားကပေးလာတဲ့ ဖူးစာရှင်အစစ်ဆိုပြီတော့ …။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီပျောရွှင်မှုဟာ မပြည့်စုံသေးဘူးလို့ သင်ခံစားရမယ်။ ရေမြောင်းပုပ်မှာ လရိပ်ကို မြင်ရသလိုပေါ့။
သင်ဟာ သင့်ချစ်သူနဲ့ ဒီလိုအမှတ်တရအချိန်လေးတွေကို ဘယ်လောက်ကြာကြာခံစားရဦးမလဲဆိုတာ မသေချာသေးဘူး …။
တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ဘယ်လောက် နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ သူ့အပြင်သင့်အပေါ်မှာေ နာက်ထပ်နားလည်နိုင်မယ့် သူလည်း ရှာလို့တွေ့တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ …။
သင်တို့နှစ်ဦးဟာ အလွန်ခြားနားလွန်းလို့ တူတူသွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့။ သင်တို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲသွားခဲ့ရင်လည်း သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ ဆက်ဖြစ်နေအုံးမှာပါနော် …။ ။
ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ့ တွက်ချက်နည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
သူနဲ့ညားခဲ့ရငျ အဆငျပွနေိုငျ၊မပွနေိုငျ တှကျကွညျ့နိုငျတဲ့နညျး…
သငျနဲ့ အတူနတေဲ့အခြိနျမှာ သူဟာပြျောရှငျနပေမေယျ့ အဲဒီပြျောရှငျခွငျးက ဟိုမရောကျဒီမရောကျနဲ့ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ပှရှေုပျတတျတဲ့ သူ့အကငျြ့က သငျ့ထကျသာမယျ့သူကို အမွဲတမျးရှာဖှနေလေို့ပဲဖွဈတယျ …။
(၂) ရတဲ့သူကတော့ သငျနဲ့သူဟာ ခဈြတော့ခဈြကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မုနျးတီးမှုနဲ့ပေါကျဖှားလာတဲ့ ခဈြခွငျးဖွဈတယျ။
အတူတူနခေဲ့ရငျလညျး လကျဝှပှေဲ့ကိုကွညျ့နရေသလို နစေ့ဉျထသတျမှာတော့ အမှနျပါပဲ …။
အကငျြ့တှကေလညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူကွပါဘူး။ တဈယောကျပွငျးလာရငျ ကနျြတဲ့တဈယောကျ ကလညျး အလြှော့ပေးမှာမဟုတျဘူး။
ဒါတောငျမှ သငျတို့မှာ သုံးပှငျ့ဆိုငျမရှိသေးဘူးနျော …။
တဈနကေ့ရြငျ သူကခဏဝေးဝေးလောကျ နကွေညျ့ကွရအောငျ လို့ပွောလာခဲ့ရငျ သငျသူ့ကိုနားလညျပေးလိုကျပါ။ သူက သငျ့ကိုမခဈြတာ မဟုတျပါဘူး။
တဈယောကျကိုတဈယောကျ နားလညျနိုငျတဲ့ အခြိနျတဈခုလောကျတော့ ထားပေးလိုကျပေါ့နျော …။
(၃) ရတဲ့သူက Yahoo! နောကျဆုံးတော့လညျး သငျက အစဈအမှနျကို တှတေ့ာပဲလေ။
သငျတို့နှဈယောကျ ရဲ့တှဆေုံ့ခွငျးဟာ ရစေကျလို့ချေါလို့ရတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ တူညီနတောပဲ …။
ဒါကွောငျ့သငျဟာ ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့အခဈြတှကေို ရှာဖှနေတေယျ။ နောကျဆုံးတော့လညျး ဘယျလူမှ သငျ့ရဲ့အခုလိုအရသာမရှိတဲ့ ပေါရှတျရှတျလူထကျ ပိုပွီးကောငျးမှာ မဟုတျဘူးဆိုတာ သငျသိလိမျ့မယျ။
မသိနိုငျဘူးလေ။ အဲဒီအခြိနျ ရောကျခဲ့ရငျ နှောငျးခငျြလညျးနှောငျး သှားမှာပေါ့ …။
(၄) ရတဲ့သူက သငျနဲ့သူ့ရဲ့အခဈြဟာ စေးကပျကပျကွီးလို ဖွဈနတေယျ။ ဘယျလိုခှာခှာ ခှာလို့မရတဲ့ပုံစံ၊ ဘဝကိုဘယျလိုဖွတျသနျးရမှနျးမသိတဲ့ ပုံစံနဲ့တူနတေယျ။
သငျကလညျး အိန်ဒွရှေငျပီသစှာနဲ့ သူ့ကိုခဈြတယျ လို့ ဖှငျ့ပွောဖို့ မရဲဘူးဖွဈနတေတျတယျ …။
သငျဟာသူ့ရဲ့နောကျဆုံးအခဈြမဟုတျဘူးလို့ မယုံသင်ျကာမဖွဈပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာယုံကွညျနပေါပွီ။
သငျဟာ ဘုရားကပေးလာတဲ့ ဖူးစာရှငျအစဈဆိုပွီတော့ …။
ဒါပမေယျ့လညျး ဒီပြောရှငျမှုဟာ မပွညျ့စုံသေးဘူးလို့ သငျခံစားရမယျ။ ရမွေောငျးပုပျမှာ လရိပျကို မွငျရသလိုပေါ့။
သငျဟာ သငျ့ခဈြသူနဲ့ ဒီလိုအမှတျတရအခြိနျလေးတှကေို ဘယျလောကျကွာကွာခံစားရဦးမလဲဆိုတာ မသခြောသေးဘူး …။
တဈယောကျအပျေါတဈယောကျဘယျလောကျ နားလညျနိုငျစှမျးရှိတယျဆိုတာ သူ့အပွငျသငျ့အပျေါမှာေ နာကျထပျနားလညျနိုငျမယျ့ သူလညျး ရှာလို့တှတေ့ော့မှာ မဟုတျတော့ဘူးလေ …။
သငျတို့နှဈဦးဟာ အလှနျခွားနားလှနျးလို့ တူတူသှားလို့မရဘူးဆိုပွီးတော့ပေါ့။ သငျတို့နှဈဦးလမျးခှဲသှားခဲ့ရငျလညျး သူငယျခငျြးကောငျးတှေ ဆကျဖွဈနအေုံးမှာပါနျော …။ ။
ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ့ တှကျခကျြနညျးလေး ဖွဈပါတယျ။